बिरामीको सेवा देखि मिस युनिभर्स नेपालको प्रतिस्पर्धीसम्म डा. नीलिमा श्रेष्ठ | AbcSanchar.com
बिरामीको सेवा देखि मिस युनिभर्स नेपालको प्रतिस्पर्धीसम्म डा. नीलिमा श्रेष्ठ
प्रकशित मिति : २७ कार्तिक २०७७, बिहीबार २३:२४
भारत बाट एमबीबीएस अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएकी डा. नीलिमा श्रेष्ठले बाल्यकाल देखि नृत्य र संगीतमा रुचि राख्ने गर्थिन । जारी मिस युनिभर्स नेपालको अब्बल प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले अहिले आफुलाई सहयोग गर्न सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ताहरुलाई अनुरोध गरिरहेकी छिन ।
फरक सोच र शैलीका साथ्आएकी श्रेष्ठले आफूलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याएकी छिन् । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा रारा तालदेखी दैलेखको ऐतिहासिक बाईसदेवल सम्मको भिडियोहरु राखेकी छन् । उनको भिडियो हेरेपछि कला, सुन्दरता र बौद्धिकताको त्रिमुर्ति मेल भएको पाउन सकिन्छ । उनलाई ब्रेभ, ब्युटी र बोल्डको समष्टि भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।